कहाँ छन् समालोचक ? कहाँ छ समालोचना ? लाग्छ– विश्वविद्यालय बौद्धिक जमात होइन, विभिन्न पार्टीहरूप्रति बफादार कार्यकर्ता उत्पादन गर्दैछ ! प्राध्यापकलाई जागिर पकाउनु छ, विद्यार्थीलाई नम्बर फकाउनु छ। नतिजा, नेपाली साहित्यको मौलिक चिन्तनको स्तर निरन्तर ओरालो लाग्दो छ।
विपदमा कार्यकर्ता खटाउनुपर्ने ऐनलाई राजनीतिक दलले टेरेनन् राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २० अनुसार दलहरुले राष्ट्रिय विपद्को समयमा खोज, उद्धार, पुनर्स्थापनालगायत अन्य आवश्यक सहयोग गर्नुपर्छ। तर, यति ठूलो महामारीमा राजनीतिक दलहरुले यो ऐनलाई बेवास्ता गरेका छन्।
लाल शंकर घिमिरे
व्यापार घाटा रहेसम्म आर्थिक वृद्धि हुँदैन ! दिगो तथा उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि तीव्र गतिमा बढ्दै गएको व्यापार घाटा घटाउनै पर्छ । यसका लागि देशभित्रै उत्पादनमा जोड त दिनैपर्छ सँगै कतिपय अनावश्यक आयातलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।
अविवेकी नेतृत्व छान्दा नागरिकले चुकाएको मूल्य छद्म इमान्दार होइन, वास्तविक इमान्दार नेता छनोट गर्न नसक्दासम्म नागरिकप्रति उत्तरदायी सरकारको परिकल्पना व्यर्थ छ।
सरकारले वैधता गुमायो, अब ‘गार्ड चेन्ज’ गरौं जनादेशमार्फत् शासन सञ्चालन गर्ने वैधता प्राप्त गरेको नेकपाको सरकार यस्तो ठाउँमा आइपुगेको छ जहाँबाट यसको निरन्तरता सम्भव देखिँदैन। के नेकपाले अब यो तथ्य बुझेर समयमै आफूलाई ‘करेक्सन’ गर्ला ?
बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड ! बलात्कार होस् वा कुनै पनि अपराधमा मृत्युदण्डको सजाय, हामीले अंगीकार गरेको संवैधानिक व्यवस्था तथा लोकतान्त्रिक आचरणको खिलाफ छ ।
बलात्कारमा यसकारण अनुचित छ मृत्युदण्ड बलात्कारपछि हत्या जस्ता गम्भीर अपराध बढ्दै जाँदा अपराधीलाई मृत्युदण्ड दिने कानून बनाउनुपर्ने माग बढ्दो छ। तर, मृत्युदण्डसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था धेरै कारणले अनुपयुक्त हुनेछ।
डा. मित्र पाठक
यी हुन् कोरोनाभाइरस विरुध्द उपयोगी जडीबुटी जडीबुटीले कोभिड–१९ निको पार्दैन। तर, यसको प्रयोगले भाइरसको वृद्धि कम गराउँछ, रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउँछ।
‘स्वास्थ्य संकटकाल’ लगाऔं अकर्मण्य सरकार र अटेर नागरिकका कारण दशैंअघि नै कोभिड–१९ महामारीले विस्फोटको रूप लिने देखिन्छ । त्यसैले तत्काल स्वास्थ्य संकटकाल लगाइहाल्नु विवेकी निर्णय हुनेछ।
कसलाई र किन दिइयो यसवर्षको भौतिक शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार ? सन् २०२० को भौतिक शास्त्रको नोबेल पुरस्कार प्राध्यापकहरू रोजर पेनरोज, राइन्हार्ड गेञ्जल र आन्ड्रिया गेजलाई प्रदान गरिने भएको छ। पेनरोज बेलायती, राइन्हार्ड जर्मन र गेज अमेरिकी खगोल शास्त्री हुन्।
पदले पछ्याइरहने युवराज खतिवडाको शक्तिको स्रोत खतिवडालाई नजिकबाट चिनेका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, “उहाँमा सबैलाई लठ्याउने मोहनी जस्तै कला छ। त्यो आखिर के हो भनेर बुझ्न कठिन छ।”
(अ)वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनले गुम्दैछ समुदायको अधिकार वन नवीकरणीय प्राकृतिक श्रोत भएकाले संरक्षणसँगै उपयोग पनि गर्दै जानुपर्छ। हामीले संरक्षणमुखी नीति बनाएर वन त जोगायौँ तर, उपयोग गर्न नसक्दा/नजान्दा काठ लगायत अन्य पैदावारको आपूर्ति असहज बनेको छ।
आफूलाई अजेय नठानौं, कोरोना रुघा होइन, हत्यारा हो ! इच्छाशक्ति र स्वस्थ शारीरिक स्थिति भए पनि हस्पिटलको उपचारविना म बाँच्थे जस्तो लाग्दैन। हल्का रुपमा नलिउँ। बेसार या अरू उपचार पद्धतिमा भर नपरौँ।
कामको मान अर्थात् कुलमान जताततै अव्यवस्था र बेथितिका कारण समाजमा व्याप्त निराशाबीच सार्थक काम गर्ने जो–कोही पात्र जनतामाझ स्थापित हुनसक्छन् । कुलमानले त्यही गरे जसका लागि उनी नियुक्त गरिएका थिए । आफ्नो व्यावसायिक दक्षता र चारित्रिक निष्ठाका कारण उनी परिणाम दिन सफल भए ।
खै कहाँ छ शान्ति ? हो, हामीकहाँ दशक लामो सशस्त्र हिंसा अन्त्य भएको छ । तर, असमान शक्ति सम्बन्धका आधारमा निर्मित अनेक यस्ता हिंसा छन्, जो भविष्यमा अर्को हिंसा जन्माउन कारक बन्न सक्छन् ।
मानव मलमूत्रबाट यसरी विस्थापन हुनसक्छ रासायनिक मल बालीनाली उत्पादनका लागि मानव मलमूत्र प्रयोगबारे सुन्दा धेरैजसोले नाक खुम्च्याउन सक्छन्। मलमूत्र प्रयोगबाट उत्पादन भएका कृषिउपज किन्न पनि हिच्किचाउन सक्छन् । त्यसैले प्राविधिक तवरबाट आम मानिसलाई यसको महत्व बुझाउनुपर्छ।
कसले अड्कायो मत्स्येन्द्रनाथको रथको पाङ्ग्रो ? गणतन्त्रका शासकले धार्मिक सांस्कृतिक कार्यमा राजतन्त्रकै सिको गरे पनि स्थानीय धर्म संस्कृतिको मर्म बुझेको देखिएन। नत्र मत्स्येन्द्रनाथको रथ तान्ने जात्रामा अप्रिय स्थिति आउँदैनथ्यो।
बीपी विचार र अवसान उन्मुख कांग्रेस बीपी कोइरालाले कांग्रेसको ताल यही हो भने चीनको कोमिङताङ पार्टी जस्तै इतिहासबाट मेटिन्छौं भनेर उहिले नै लेख्नुभएको थियो। कांग्रेसले आफ्नो चालढाल, सोच्ने तरिका र क्रियाकलाप नबदल्ने हो भने अब समाप्त हुन्छ।
कोरोनाबाट आत्तिएर अशान्ति मच्चाउने कि अनुशासित भएर बाँच्ने ? संभाव्य कोरोना संक्रमणबाट डराउँदा नहुनुपर्ने व्यवहार र घटनाहरु भइरहेका छन्। काठमाडाैंको बानेश्वर, चितवनको रत्ननगर, बागलुङ, वीरगञ्ज वा ललितपुरमा स्वास्थ्यकर्मी र सर्वसाधारणमाथि भएका अप्रिय घटना डरबाटै सिर्जित भएका हुन्।